Shina FIBC PE Film Auto tavoahangy endrika famonoana masinina manapaka famehezana orinasa sy mpanamboatra | VYT
Ny kitapo anaty vozona dia manome ny rafitra PLC, ary ny motera boribory dia entin'ny haitao mandroso manerantany AC manerantany, izay manana toetra mampiavaka ny tady lehibe, fahombiazana avo, hafainganam-pandeha ary feo ambany. Ny famolavolana tontonana fiasa dia miovaova, izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa samihafa; ny rafitra dia mandray ny endrika firafitra sinoa, izay mety amin'ny fametrahana sy fikojakojana.
1 Kitapo PE （M） sakany （mm） 1200 (Max)
2 Halavan'ny kitapo anatiny (mm) 2500-3000mm
3 Fanapahana mazava tsara (mm） ± 10mm
4 fahaiza-mamokatra （pc / h） 60-120
5 mpanara-maso ny mari-pana 0-350 ℃
6 Hery tanteraka 36Kw
7 Zintin'aratra 380V (50HZ) ， 3ph
8 rivotra voafintina 10Kg / cm2
9 Fepetra fametrahana （mm） 2200 * 2100 （Anisan'izany ny kabinetra elektrika3100） * 1800
10 Milanja （kg） 3000kg
11 Fitaovana azo ampiharina Sarimihetsika coextrusion an'ny LDPE, HDPE, NYLON
Mba hiarovana ny fitaovana ao anaty kitapo lehibe amin'ny antony ara-tontolo iainana hampiatoana akora ho vovoka ivelan'ny kitapo lehibe dia tokony apetraka ao anatiny ny liner. Ny masinina fametahana tavoahangy tavoahangy vita amin'ny tavoahangy dia natao hamolavolana ilay kofehy miaraka amin'ny asan'ny famehezana sy fanapahana, mety amin'ny vatan'ny kitapo lehibe efatra, mameno ny spout ary ny famoahana.
Aza mampiasa an'ity fitaovana fanaraha-maso ity amin'ny tontolo manaraka:
1. Aiza ny fiovan'ny herinaratra dia mihoatra ny ± 10% amin'ny valin'ny hatsiaka.
2. Ny fahaiza-mamatsy herinaratra dia tsy azo antoka amin'ny toerana misy fahaiza-manao voafaritra.
3. Ny maripanan'ny efitrano dia ambany 0 ℃ na mihoatra ny 35 ℃.
4. ivelany na ny toerana izay hiposahan'ny hazavan'ny masoandro mivantana.
5. Toerana iray akaikin'ny heater (heater elektrika).
6. Toerana misy hamandoana ambany 45% na mihoatra ny 85% ary toerana misy ando.
7. Toerana manimba na feno vovoka.
8. Toerana mora iharan'ny fipoahan'ny entona na fipoahan'ny solika.
9. Raha toa ka mora mihovotrovotra be ny toerana apetraka ny kitapo vozon'akanjo vozona dia apetraho amin'ny toerana hafa ny boaty fanaraha-maso.
1. boaty fanaraha-maso:
Araho azafady ny torolàlana hametrahana azy tsara. Alohan'ny hifandraisan'ny boaty fanaraha-maso amin'ny famatsiana herinaratra, azafady mba jereo raha ny volan'ny herinaratra ampifandraisina dia mitovy amin'ny herinaratra voamarika eo amin'ny boaty fanaraha-maso, ary ny famatsiana herinaratra dia azo omena aorian'ny fanamafisana ny toerana. Raha misy mpanova herinaratra, dia toy izany koa ny manamarina alohan'ny famatsiana herinaratra. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy apetraka eo am-pamonoana [ny off] ny bokotra herinaratra karazana bokotra eo amin'ny tavoahangy anaty kitapo vozona.
2. Tady herinaratra:
Azafady azafady tsindrio ny tadin'ny herinaratra amin'ny hery misintona na manodinkodina azy be loatra. Aza apetraka eo akaikin'ny faritra mihodina ny tadin'ny herinaratra, farafaharatsiny 25 mm miala eo.
Mba hisorohana ny fikororohana herinaratra ateraky ny fanelingelenana amin'ny tabataba sy ny famoahana herinaratra, ny tariby miorina amin'ny tsipika herinaratra dia tokony hipetraka tsara. Raha te hampifandray ilay fitaovana fampiasa elektrika ianao dia araho azafady ilay toerana voalaza.
4. Famongorana sy fanaparitahana:
Mba hanesorana ny boaty fanaraha-maso dia tsy maintsy vonoinao aloha ny herinaratra ary esory ny plug-jiro. Rehefa esory ny plug-jiro dia aza esory fotsiny ny tadin'ny herinaratra fa tsy maintsy tazominao amin'ny tanany ilay tsiro herinaratra ary esory izany. Misy herinaratra mahery vaika mampidi-doza ao amin'ny boaty fanaraha-maso, noho izany mba hanokafana ny fonon'ny boaty fanaraha-maso dia mila manidy ny herinaratra ianao ary miandry mihoatra ny 5 minitra alohan'ny hanokafana ny fonon'ny boaty fanaraha-maso.
Fikojakojana, fanaraha-maso ary fanamboarana.
Ny asa fanamboarana sy fikojakojana dia tokony hataon'ny teknisianina efa niofana.
Vonoy azafady ny herinaratra rehefa manova ny fanapahana sy ny fanapahana faty.
Ampiasao ny faritra tena izy.
Teo aloha: Kalitao avo lenta ho an'ny milina fanadiovana FIBC - Kitapo Jumbo mandeha ho azy Manadio Machin Air Washer FIBC Cleaner ESP-B - VYT
Manaraka: Masinina fanadiovana kitapo FIBC Jumbo ESP-A
Masinina famehezana tavoahangy tavoahangy
Pe Big Heating Heating famehezana ary fanapahana milina
Masinina Pe Heating Heating Sealing Cutter